Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Expo 2020: Emirates Airlines ukuya Seychelles
Inkampani yeenqwelomoya ityikitye iSivumelwano sokuQonda (i-MoU) kunye neBhodi yezoKhenketho yaseSeychelles, iqinisekisa inkxaso yayo kwisizwe esikwisiqithi.
I-Emirates ibisebenzela ilizwe iminyaka eli-16, kwaye yayiyeyokuqala inqwelo moya yamazwe ngamazwe ukuqalisa kwakhona iinkonzo zabakhweli ukuya eSeychelles ngo-Agasti ka-2020.
Ukusukela ngoJanuwari 2021, i-Emirates ithwele abakhweli abasondele kuma-43,500 ukuya kwindawo edumileyo yoLwandlekazi lwaseIndiya ngeDubai.
I-Emirates ityikitye iSivumelwano sokuQonda (i-MoU) kunye neBhodi yezoKhenketho yaseSeychelles kwi-Expo 2020. Isivumelwano siqinisekisa ukuzibophelela kwenkampani yeenqwelo moya kwisizwe esisesiqithini kwaye sichaza amanyathelo adibeneyo okukhuthaza urhwebo nokhenketho kweli lizwe.
I-Memorandum of Understanding yasayinwa ngu-Ahmed Khoory, i-Emirates' SVP Commercial West Asia & Indian Ocean, kunye noSherin Francis, uNobhala oyiNtloko weSebe lezoKhenketho, i-Tourism Seychelles. Isivumelwano satyikitywa phambi ko-HE uMnumzana Sylvestre Radegonde, uMphathiswa weMicimbi yaNgaphandle noKhenketho kunye no-Adnan Kazim, iGosa eliyiNtloko lezoRhwebo kwi-Emirates.
Lo msitho wawukhona nabaphathi be-Emirates: Orhan Abbas, SVP Commercial Operations Far East; U-Abdulla Al Olama, uMphathi weNgingqi weMisebenzi yoRhwebo eFar East, eNtshona Asia kunye noLwandlekazi lwaseIndiya; Oomar Ramtoola, uMphathi weZiqithi zoLwandlekazi lwaseIndiya; Silvy Sebastian, uMphathi woHlahlelo lweShishini eNtshona Asia kunye noLwandlekazi lwaseIndiya; kunye nabaphathi bezoKhenketho eSeychelles: uBernadette Willemin, uMlawuli Jikelele weNdawo yokuFikela uKhenketho kwiSeychelles; kunye neNoor Al Geziry, iOfisi yezoKhenketho eSeychelles kuMbindi Mpuma.
U-Ahmed Khoory, iSVP yezoRhwebo eNtshona Asia kunye noLwandlekazi lwaseIndiya e-Emirates, uthe: “I-Emirates yabelane ngobudlelwane obuluqilima neSeychelles ukusukela ngo-2005 kwaye ilizwe lesiqithi lihlala liyintengiso ebaluleke kakhulu kuthi. Isivumelwano esisayinwe namhlanje sibubungqina obuqinileyo bokuzinikela kwethu kunye nenkxaso kwisizwe esisesiqithini. Sibulela amaqabane ethu ngenkxaso yawo eqhubekayo kwaye sijonge phambili ekuqhubekeni nokukhulisa ubuhlakani bethu obuyimpumelelo. ”
UMnumzana Sylvestre Radegonde, uMphathiswa weMicimbi yezaNgaphandle noKhenketho, uthe: “Inqwelomoya ye-Emirates ibisoloko iqinile kwaye yomelele kwinkxaso yayo isiya eSeychelles kwaye siyayibulela loo nto. Ke ngoko, singathanda ukubonisa inkxaso yethu kulo nyaka uzayo ngethemba lokuba iya kuba ngunyaka ongcono kuzo zombini iSeychelles nakwinkampani yeenqwelomoya. ”
I-Emirates iqalise ukusebenza kwi-Seychelles kwi-2005 kwaye i-airline ngoku isebenza ngeenqwelomoya zemihla ngemihla ukuya kwisiqithi-sesizwe, isebenzisa i-Boeing 777-300ER indiza yayo ebanzi. I-Emirates yayiyeyokuqala inqwelo moya yamazwe ngamazwe ukuqalisa kwakhona iinkonzo zabakhweli ukuya eSeychelles ngo-Agasti ka-2020, ehambelana nokuvulwa kwakhona kwelizwe kubakhenkethi bamazwe ngamazwe. Ukusukela ngoJanuwari 2021, i-Emirates ithathe abakhweli abasondele kuma-43,500 ukuya kwisiqithi-sizwe, bevela kwiindawo ezingaphezu kwe-90, kubandakanya iimarike eziphezulu, i-United Arab Emirates, iJamani, iFransi, iPoland, iSwitzerland, i-Austria, iSpain, iRashiya, iBelgium kunye ne-United States. yaseMelika.
I-Emirates iphinde yaqala ngokukhuselekileyo ukusebenza kwiindawo ezingaphezu kwe-120 ngaphakathi kwenethiwekhi yayo yehlabathi, ngeDubai. Inkampani yeenqwelo moya ikhokele kushishino ngeemveliso zayo ezintsha kunye neenkonzo, kubandakanywa iseti ebanzi ye amanyathelo ezempilo nokhuseleko kwinyathelo ngalinye lohambo, Itekhnoloji engenakunxibelelana kwisikhululo seenqwelomoya saseDubai, imigaqo-nkqubo yokubhukisha enesisa nebhetyebhetye, kunye neshishini-kuqala multi-risk inshorensi inshorensi.